Cyclamen फूल अन्य असाधारण आकर्षण र प्रशस्त फूल बीचमा बाहिर खडा।
Cyclamen फूल पुतली जस्तो र एक सुखद सुगन्ध छ। एक बिरूवा 50 inflorescences साथ ब्लूम गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तिनीहरूले astonishingly वैविध्यपूर्ण छन्। Cyclamen फूल सेतो वा रातो रंग छ, रातो रंग धेरै रंग छ। हृदय आकारको leathery पात लामो petioles बसिरहेका छन् र खैरो-चाँदी डिजाइन संग सजाया छ। मानिसहरू अल्पाइन cyclamen बैंगनी, dryakvoy र earthy रोटी भनिन्छ। उहाँका घनिष्ठ नातेदार - violets र primroses। आफ्नो समानता ध्यान फूल को तस्वीर देख द्वारा देख्न सकिन्छ। Cyclamen - धेरै capricious बोट। तर उहाँले अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न छ भने, यो जाडो भर आफ्नो blossoming प्रसन्न हुनेछ।
उचित साथ हेरविचार cyclamen 25 वर्ष सम्म बाँचिरहेका छौं। तिनीहरूले हेरविचार कस्तो चाहिन्छ? Cyclamen प्रशस्त पानी र तीव्र गर्मी सहन छैन। तिनीहरूले ब्लूम गर्न बन्द गर्मी, आफ्नो पात पहेंलो बारी र गिर। cyclamen लागि अधिकतम तापक्रम - 12-15 ° सी तल 10 ° C गिरा तापमान अनुमति छैन वा माथि 20 ° सी उठ्नेछ Cyclamen प्रकाश को धेरै रुचाउनु छ, तर प्रत्यक्ष सूर्यका छोड्न सक्दैनौं। तल हजारी संयंत्र ट्रे पानी खन्याउन मनमोहक आवश्यक छ। कुनै पनि मामला मा छैन पात र फूल मा पायो पानी राख्न अनुमति गर्नुपर्छ। यो बोट rots र मृत्यु देखि। यो एक-तेस्रो माटो बाहिर पिक गर्नुपर्छ: यो पूर्ण जमीन मा tuber खन्नुहोस् गर्न असम्भव छ। यस पट अन्यथा बोट गरिबी ब्लूम र Rot सक्छ, सानो हुनुपर्छ। बाँकी अवधि, cyclamen वसन्त मा सुरु हुन्छ। यस समयमा, पातहरु र फूल सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो र गिर। छैन सबै पात crumble भने, तिनीहरूले काटेर वा घुमाई छन्। संयंत्र एक छायादार सुन्दर ठाउँमा राखिएको छ, र कहिले काँही earthen कोठा को सुकाउने बच्न पानी हाले। शरद ऋतु मा, पहिलो पात, जब बाँकी अवधिका, पछि cyclamen गर्दै छन्। यसलाई खुवाउन सुरु भएको प्रत्यारोपण पछि एक महिना।
cyclamen को प्रकार
इनडोर पर्यावरण मा बिरुवाहरु को2प्रकार हुर्किसकेका: युरोपेली cyclamen र cyclamen फारसी। फूल र फारसी को पात युरोप मा भन्दा सानो। बोट को दोस्रो प्रकार कुनै बाँकी अवधि छ, र यो यसको पात बगाएको छैन। फूल cyclamen फारसी बिना गंध। thermophilic यस प्रकारको र 18-20 ° सी मा बढ्छ
cyclamen को प्रजनन
बोट र tubers प्रचारित र हवाई मार को मद्दतले।
cyclamen को प्रयोग
यो उनको घरमा एक cyclamen फूल छ मनमोहक छ। यो पावर प्लान्ट आवास मा एक तनावमुक्त वातावरण सिर्जना सुधार गर्छ। यो दुष्ट शक्तिहरूको जोगाउँछ, र मुड सुधार कि विश्वास छ। प्राचीन समयमा, cyclamen रस एक विषको असर रोक्ने औषघि रूपमा प्रयोग भएको थियो। अब लोक चिकित्सा मानिसहरू मा potency, बाँझोपन उपचार, हृदय दर र हर्मोन प्रणाली, महिनावारी को normalization स्थिर बृद्धि गर्न बोट प्रयोग गर्दछ। यो मधुमेह, एलर्जी, गाउट, माइग्रेन, rheumatism र सर्दी संग विरामीहरु लागि प्रयोग गरिन्छ। तर हामी cyclamen को tubers मा saponins, जो ठूलो परिमाणमा हुन सक्छ उल्टी, पखाला र convulsions समावेश सम्झना गर्नुपर्छ।
जलकुंभी मिक्स - intoxicating गन्ध संग सुन्दर फूल
स्याउको रूख "kovalenkovskoe": विविधता र हेरविचार को विवरण
र कसरी गर्दा खुला जमीन मा स्क्वास बीउ रोपेर गर्न?
बरद मिश्रण: तयारी र प्रयोग
फाटक, बफेट, Zuckerberg ... दुनिया मा शीर्ष 30 अमीर मान्छे छ अरू कसले?
सपनाको पुस्तकको भाग्य निर्धारण गर्नुहोस्। सपना कस्तो छ?
Ganja - एक दबाइ छ?
जहाँ क्रास्नोडार जाने? मनोरञ्जन लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँ
पाक सोडा: रासायनिक सूत्र। पाक सोडा र यसको आवेदन रासायनिक सूत्र
अंग्रेजी प्रयोगका शर्तहरु उदाहरण संग क्रिया
पनीर "राष्ट्रपति": संरचना, दायरा र निर्माता